የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ-አዴፓ-እና የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ-አብን-በጋራ በሚሰሩባቸዉ ጉዳዮች ላይ አብረዉ ለመስራት ተስማሙ Kichuu
HomeAmharicየአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ-አዴፓ-እና የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ-አብን-በጋራ በሚሰሩባቸዉ ጉዳዮች ላይ አብረዉ ለመስራት ተስማሙ
የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ-አዴፓ-እና የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ-አብን-በጋራ በሚሰሩባቸዉ ጉዳዮች ላይ አብረዉ ለመስራት ተስማሙ
የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ/አዴፓ/ እና የአማራ ብሄራዊ ንቅናቄ/አብን/በጋራ በሚሰሩባቸዉ ጉዳዮች ላይ አብረዉ ለመስራት ተስማሙ
Dubbiin biyyaa dubbii haaloo bahannaa miti; dubbii sirnaan taa’anii mariin waan biyyaaf ta’u qiyyaasan.
Warri bobaa ODP jala seentanii, ABOtti ija babaaftan kana irraa baradha!!
Aktivistii fi OPDOn tokko tokko ABO shanee mormurraa gara jibbiinsa waligalaa Oromiyaa dhihaatti jijjiramaa jiru. Warri ODP jedhamtu korreenti harkaan qabdi yeroo angorraa filannoon arii’amtu.
Abbootin Gadaa Gujii murtii gaarii dabarsan. ‘Yookan wal-ta’aa humna hidhate Oromoo casaa Oromiyaatti galchaa yoo hin taane badheetti bahaa wal tumaa malee ummata keessa hin deeminaa’ jedhan.
University Adaamaa: Universitii saayinsii fi technlogy barattoota 56 irratti murtoo ari’uu dabarsuuf.